China Ukuphuza Ikhofi China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ukuphuza Ikhofi - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-Ukuphuza Ikhofi)
Amakhasimende akho azothola ukukhishwa kwe-Ripples uma bebona u-selfies wabo, izingcaphuno ezizithandayo, noma imilayezo ekhethekile nezithombe eziphuzweni zabo. Kungakhathaliseki ukuthi usuku lokuzalwa olujabulisayo noma Ngiyakuthanda, amakhasimende angakha imiklamo yawo siqu ngokwabo kanye nabangane bawo nge- amazon...
i-lufthansa ikhofi yokunyathelisa ikhofi
Ubuciko be-Latte buyathandwa eminyakeni embalwa edlule, futhi njalonjalo, abantu bathola izindlela zokuhamba ngenhla nangaphezulu kwalokho okudalwe ngaphambili. Okokuqala kwakukhona ubuciko obuhle bokubukwa kwe-latte obudalwa ngokukhethekile ngabadwebi bekhofi abanamakhono. Kwabe sekukhona ubuciko be-3D latte okwenza...
I-reffinoror ikhofi yomshini wephrinta yomshini
Isitolo sekhofi eShoreditch, eLondon, sithatha ubuciko be-latte esinye isinyathelo ngokuqhubekayo ngokusebenzisa i-tech yokunyathelisa ye-3D ukufanisa abantu ndawonye. Umshini wokupakisha wekhofi we-cappuccino latte ngokuzenzakalelayo nge-WIFI umsebenzi, ukukhiqizwa okuvela ku-Ant- Inkampani yokuphrinta ekhethekile...
Hlela ikhofi yomenzi we-ripple
Umshini wokupakisha wekhofi we-cappuccino latte ngokuzenzakalelayo nge-WIFI umsebenzi, ukukhiqizwa okuvela ku-Ant- Inkampani yokuphrinta ekhethekile kwi-digital food printer. Njengoba le phrinta yokudla kungekhona nje kuphela ongayiprinta ikhofi, kodwa futhi ikhekhe, ushokoledi, i-macaron, amakhukhi, i-candy,...
Ukuphuza Ikhofi Ukuphuza ikhofi Okubhaliwe kwekhofi Umshini Wokushicilela Ikhofi Umshini Wokunyathelisa Ikhofi Iphrinta yekhofi A4 Ukudweba Umshini Wekhofi Foam Maker Ikhofi